रविलाई कहाँ कसरी ठेगान लगाउनुपर्छ वा उकास्नुपर्छ ? त्यो त मलाई थाहा छ , किशोर श्रेष्ठको टेलिफोन वार्ता लिक – ताजा समाचार
रविलाई कहाँ कसरी ठेगान लगाउनुपर्छ वा उकास्नुपर्छ ? त्यो त मलाई थाहा छ , किशोर श्रेष्ठको टेलिफोन वार्ता लिक
वार्तामा श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘‘मैले चाहेमा तपाईंहरुलाई मिनेटमै सिध्याउन सक्छु तर म त्यो गर्दैन ।’’ श्रेष्ठले आफू रवि लामिछानेको शुभेच्छुक नै भएको बताउँदै भनेका छन्, ‘‘अनावश्यक पंगा नलिनुस् । आचारसंहितामा बस्नुस् । सिद्धान्तमा बस्नुस् । गरेर खानुस् । मेहनत गर्नुस् भनेको हो कि होइन ? मैले कोडअफ कन्डक्ट हेर्ने हो । अमेरिका छोडेर नेपाल आएर प्रेसपास लिनुस् पहिले नै भनेको हो कि होइन ?’’ अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘‘तपाईं रविको कुरा नगर्नुस् । आफ्नो कुरा गर्नुस । रविलाई कहाँ कसरी ठेगान लगाउनुपर्छ वा उकास्नुपर्छ ? त्यो त मलाई थाहा छ’’, भनेको वार्तामा सुनिएको छ । कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बारम्बार अनभेरिफाइड स्टोरी कसैले पनि प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने सुझाएका छन् ।